एक अध्ययनको दाबी : यसरी कम गर्न सकिन्छ कोरोना संक्रमणको जोखिम ! - समृद्ध नेपाल
एक अध्ययनको दाबी : यसरी कम गर्न सकिन्छ कोरोना संक्रमणको जोखिम !
नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीब्र रुपमा बृद्धि भइरहेको छ । हरेक दिन संक्रमित थपिने क्रम बढीरहेको छ भने अर्कोतर्फ दोस्रो लहरमा अधिकांश कोरोना संक्रमित बिरामीलाई सास फेर्न समस्या भइरहेको छ । स्तो अवस्थामा, सबैजना कुनै न कुनै रूपमा कोरोना संक्रमणबाट बच्न खोज्दैछन् वा कम्तीमा कोरोनाको गम्भीर बिरामी हुनबाट जोगिन खोज्दैछन् । एक अध्ययनले कसरी कोरोना संक्रमणको जोखिम ३० प्रतिशतसम्म कम गर्ने भन्ने विषयमा केही उपायहरु बताएको छ ।
व्यायामले शरीरलाई फिट राख्छ तर एक नयाँ अध्ययनमा यो कोरोना बिरूद्धको लडाईमा लाभदायक भनेर उल्लेख गरिएको छ।यो अध्ययन स्कटल्याण्डको ग्लासगो क्यालेडोनियन विश्वविद्यालयका अन्वेषकहरूले गरेका हुन्। यो विश्वमा पहिलो ठूलो यस्तो ठूलो अध्ययन हो जुन व्यायाम र कोभिड १९ प्रतिरक्षाको संयोजन गरेर गरिएको छ।
यस अध्ययनका अनुसार दिनमा ३० मिनेट हप्ताको ५ दिन वा १५० मिनेट व्यायाम गर्दा सास फेर्न समस्या हुँदैन। अध्ययनले हिड्ने दौडने साइकल गर्ने र मांसपेशी मजबुत बनाउन अभ्यास गर्ने सल्लाह दिएको छ ।अध्ययनमा भनिएको छ कि यस्तो व्यायाम खोपको क्षमताभन्दा ४० प्रतिशतलाई अझ प्रभावकारी ह्न पनि सक्छ । वैज्ञानिकहरूको टोलीले भनेका छन् निश्चित समयको लागि व्यायाम गर्दा कोभिड १९ जस्ता संक्रामक रोगको जोखिम ३१ प्रतिशत र यस महामारीबाट हुने मृत्युको जोखिम ३७ प्रतिशतले कम गर्न सकिन्छ। यसले खोपलाई पनि प्रभावकारी बनाउँछ।
ग्लासगो क्यालेडोनियन युनिभर्सिटीका प्रोफेसर सेबस्टियन चेस्टीन भन्छन् हाम्रो शारीरिक गतिविधिले प्रतिरक्षा प्रणालीको सुरक्षा गर्छ र प्रतिरक्षा कोषहरूलाई अझ बलियो बनाउँछ। यस अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि नियमित शारीरिक गतिविधिले संक्रामक रोगबाट बचाउँछ।
चस्टीनले अगाडि भनेका छन् यस अध्ययनले स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि तपाईंले आफैलाई सक्रिय राख्नुपर्छ। यसले तपाईलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा फिट राख्दैन तर हामीसँग अब प्रमाण छ कि यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। यसले खोपलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ। यही कारण हो कि हामीले मानिसहरूलाई खोप लगाउनु अघि १२ हप्ताको शारीरिक गतिविधि कार्यक्रम गर्न सल्लाह दिइरहेका छौं।”
दयाहाङ राईबारे कसैलाई थाहा नभएका अचम्मका कुराहरु हेर्नुहोस !
९ बर्षीय रिहाना उपचारको लागि पैसाको अभाबले मृत्यु सङ्ग लड्दै सके सहयोग नसके सेयर गरिदिनु होला !
सपनाले हानिन् बिनयजङ्ग लाई झापड !
उदयपुरको वाईवाई मिस दोस्रो संस्करण फाल्गुन २१ देखि सुरु !
नबोली यो लडाई जित्छु,मान्छे आँसु झार्न माहिरहुन्छ !
मापदण्डविपरित सञ्चालन भइरहेको क्रसर सञ्चालक र स्थानीयबीच झडप !
रोमान्टिक बने सशस्त्र प्रहरीका आईजी भिडिओ भयो भाइरल !
नेपाल-भारत सीमा बन्द गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय !